ညီလင်းသစ်: ပြိုင်ဖက်... (Behind the picture)
Posted by ညီလင်းသစ် au 11.11.12
ပို့စ်ရေးတိုင်း အကွက်စေ့စေ့လေးနဲ့ တိတိကျကျ ရေးတတ်လေ့ရှိတာကို ချီးကျူးပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာ ကျွမ်းသလို စာအရေးအသားလည်းကောင်းတယ်။
တစ်ဦးချင်းရဲ့ အရည်အချင်းတွေ စုပေါင်းထားတဲ့ သက်တံ့ဆယ်စင်းလို စာအုပ်လေးတွေ ဆက်လက် ဖတ်ခွင့်ကြုံချင်ပါသေးတယ် မောင်ညီလင်းရေ။
ကိုညီလင်းသစ် ကတော်.တော.ကို အသေးစိတ်၊ အနုစိတ် လုပ်တတ်တယ်ထင်တယ်။
အိမ်နေရင်း တီရှပ်ကိုတောင် မီးပူတိုက်
စကားမစပ် အိမ်အပြင်အဆင်လေးက မြန်မာပြည်က အိမ်နဲ.တောင်တူသလိုဘဲ။ ကြည်.ရတာ cozy and comfy ဖြစ်တယ်။ ပါကေးလိုမျိုးကြမ်းပြင်တွေ.ရတာလဲကြိုက်တယ်။
ကိုညီလင်းသစ်သားလေးနဲ.မအိမ်သူတို.ပုံတွေမတွေ.တာတောင် အတော်ကြာသွားပြီ။ ရန်ကုန်ပို.စ်နောက်ပိုင်းလောက်ထဲက သ်ိပ်မတွေ.ရတော.ဘူး။
အသေးစိတ်နဲ့ တိတိကျကျအမြဲဖြစ်နေစေအောင် ကြိုးစားတဲ့ အကို့လုပ်ရပ်လေးတွေက လေးစားစရာ ပါအကိုရေ..
I do know that you will share this photo shooting technique. sorry if i overlook on your subject, i love the decoration of your living room, as it has Myanmar's culture.
မိုးနတ်က ဓါတ်ပုံပညာအကြောင်းအများကြီးနားမလည်ပေမဲ့..လာအားပေးသွားပါတယ် အကိုတော်ရေ...မသိနားမလည်သေးတဲ့ အကြောင်း
အရာတွေကို နားလည်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ၊
ပုံကို အရင်ကြည့်လိုက်တော့ .. ဟယ် ... ကြက်တောင်က လေထဲမှာ မြောက်နေတယ် ၊ ဘယ်လို လုပ်ထားလဲမသိဘူး.. လို့တွေးမိတယ်၊း)
အဲဒီလောက် တုံးတား)
ကိုညီလင်းရဲ့ ဘလော့ကို အမြဲလာဖတ်ပါတယ်
ဒါက ပထမဆုံး comment ရေးခြင်းပါ
အထူးသဖြင့် ကိုညီလင်း စာထဲက အတွေးတွေ ၊ ခံစားချက်တွေကို သဘောကျပါတယ်
သက်တံ့ဆယ်စင်း ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပရိုဂျူဆာကြီး ဆြာရန်အောင်ကို အပူကပ်မှပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျ၊ သူက အတွေ့အကြုံ ရှိထားသူ မဟုတ်လား..၊း)
စိတ်ပါတဲ့ ဟာတွေကျတော့လည်း လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ အသေးစိတ်သလိုများ ဖြစ်သွားခဲ့တာလား မသိပါဘူးဗျာ..၊း) ဟုတ်တယ်နော်၊ သားနဲ့ မအိမ်သူတို့ အကြောင်း မရေးဖြစ်တာ နည်းနည်းကြာနေပြီ၊ သားနဲ့ ပတ်သက်တာ တစ်ခုရေးဖို့ လျာထားတာတော့ ရှိနေတယ်ဗျ၊ မကြာခင် ဖြစ်မလားပဲ...၊
အမှန်ပေါ့ဗျာ..၊ အဲဒါကြောင့် သူ့ကိုပဲ ရွေးဖြစ်သွားခဲ့တာပါပဲ...၊
အမြဲတစေ လာလည်ပြီး အားပေးနေလို့ ကျေးဇူးပါ ညီမရေ...၊
In photography, it is said that subject is not always the only center of interest but background playsamajor role as well. So you are welcome to appreciate what looks pleasant to your eyes. :) Thanks ...!
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ နည်းပညာတွေ အခေါ်အဝေါ်တွေ ပါလာပြီဆိုရင် စာဖတ်သူ အများစုအတွက် ပို့စ်တစ်ပုဒ်က စိတ်ဝင်စားမှု ကျသွားလေ့ ရှိပါတယ်၊ ဒီလို အခြေအနေမှာတောင် ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ အားပေးသွားလို့ ကျေးဇူး အထူးပါဗျား..၊း)
အာ... အဲဒီလိုကြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချ မပြောကြေးလေဗျာ..၊း) အခုလို လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ ရနေတဲ့ နည်းပညာ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကျနော်တို့အားလုံး အဖို့ မသိ၊ နားမလည်ခြင်းတွေ များလှပါတယ်ဗျာ..နော၊ ဟိုး...အရင် တိတ်တိတ်လေး လာလည်သွားတဲ့ အချိန်တွေ အတွက်ရော အခုထားခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး ကွန်မန့်လေး အတွက်ပါ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
အော်.. ဒီလိုကိုး .. ဒါဆို အရင်က မီးပူပုံ ရိုက်ခဲ့ပုံနဲ့ နဲနဲဆင်တူတယ်.. ဒီပိုစ့်မဖတ်ခင်က ကျွန်မတွေးနေမိတာက အနောက်ခံ အနက်ရောင်တစ်ခုခု များခံထားမလားလို့.. ခုတော့ဟုတ်မှမဟုတ်ပဲကိုး.. :) ဒါနဲ့ အရှေ့က နံရံပေါ်မှာ ကျနေတဲ့ အရိပ်တွေကို သဘောကျတယ်.. အဲဒါ အနောက်ဘက်က ခန်းစီးရဲ့ အရိပ်များလား..
ညီမက မှတ်မိတယ်၊း) ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအတိုင်း ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ၊ မီးကို အပေါ်က မပေးဘဲ ဘေးကပေးတာပဲ ကွာသွားတာ..၊ နံရံပေါ်က အရိပ်က မျက်နှာကြက်က မီးအုပ်ဆောင်းရဲ့ အရိပ်ပါ၊ ပုံထဲမှာ သူ့ကို မပါအောင် ရိုက်ထားလို့...။
ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ပညာလေးကို စိတ်ဝင်စားတယ် ထဲထဲဝင်ဝင်မလေ့လာဖြစ်သေးတာက ကင်မရာကောင်းကောင်းတစ်လုံးဝယ်ရမှာရယ် ခရီးတွေထွက်ပြီး ပုံကောင်းတွေမရိုက်နိုင်သေးတာရယ်ကြောင့်ပါ ...ခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရိုက်ပုံရိုက်နည်းလေးကို ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါ...
ညီ..ကတော့ ကင်မရာကိုင်ပြီး ချိန်လိုက်တာပဲ ပြီးရင် ရိုက်ထည့်လိုက်တယ် တစ်ခါတလေ ခြေထောက်ပြတ် ခေါင်းပြတ်တော့ြုဖစ်တာပေါ့း)
ဥာဏ်တုန်းပုံများ ကြက်တောင်ကို အစ်ကို့သားလေးက လှမ်းပစ်ပေးတယ် ထင်နေတာ။ အပ်ချည်ကြိုးနဲ့ ချည်ထားတာကိုး၊
You're suchatalented artist! Please keep it up. :)
ကိုညီလင်းသစ်တော့ စာရေးကောင်း၊ သီချင်းဆိုဗီဒီယိုရိုက်ကောင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကျွမ်း စွယ်စုံပဲဗျို့၊ အားကျတယ်ဗျာ
really good your photos idea..
အားပါးပါး......Canon 5D mark II....ကြီးကိုရော..... ..... ကမ်မရာနောက်က ဖန်တီးသူကိုရော အားကျပါတယ်.... ;)
ဆရာတစ်ယောက်ကတော့ ပြောဖူးတယ်...... အားကျတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းပြောတိုင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောပဲ သူများဆီက ကိုယ့်ကို အားကျတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းပြန်ကြားရအောင် ကြိုးစားသင့်တယ်တဲ့ ........
အာ့ကြောင့် အားကျတယ်ဆိုတဲ့စကားကို နည်းနည်းလျှော့ပြောရမယ်ထင်တယ်နော့် ....။။.တော်ကြာ ဆရာ့ စကား နားမထောင်သလို ဖြစ်နေမှာစိုးလို့:P :P :P
ရဲ့....၊ဘက်တန်ကို ထရိုင်ပေါ့မှာ ညှပ်ထားလိမ့်မယ်လို့
နောက်ကနေ ကက်ထူအမဲတစ်ခု နောက်ခံထားတယ်လို့
လည်း ထင်နေလိုက်သေး....:P အဲ့ဒီလိုကို ဓာတ်ပုံအမြင်
က စူးရှတာကလား.......:D။ခုလိုမျိုးလေး ဝေမျှပေးတာ
ဓာတ်ပုံ ပညာကလဲ အရမ်းကို ကျယ်ပြန့် တယ်နော်... ကျွန်တော့် အဖေကလဲ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်... ကျွန်တော် ပြန်ရင် အဲဒီအလုပ်ကို ဆက်လုပ်ရမယ်တဲ့... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ကင်မရာ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်း နားမလည်သေးဘူး။ အစ်ကိုနဲ့ အပြင်မှာ တွေ့ ချင်တဲ့ထဲမှာ ဓာတ်ပုံအယူအဆလေးတွေ အကြောင်းကို မေးချင်တာလဲ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်ကို ဒီကို လာမယ့်အချိန်မှာ ကျွန်တော်က ရှိနေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီလကုန်တာနဲ့ ကျွန်တော်က ပြန်ပြီ။ အစ်ကိုနဲ့ အပြင်မှာ တစ်ခါလောက်တော့ တွေ့ ဖူးချင်ပါသေးတယ်...
ပါးကျပ်ဟောင်းလောင်းပွင့် .. သဘောတွေကျ .. ချီးကျုးမိပါတယ် အကိုတော်ရေ ..
မမိုးငွေ့၊ ညီငယ်မောင်မျိုး၊ ကိုစိုးကြီး၊ ညီမဇွန်၊ ညီမ,ချစ်စံအိမ်၊ ကိုသီဟသစ်၊ Anonymous၊ မကဗျာ၊ ကိုညိမ်း၊ ကိုညီရဲ၊ ညီမVista ...
ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ လာလည်ကြလို့ အားလုံးကို တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။
ကင်မရာကောင်းကောင်း ဝယ်ပြီးရင် အဲဒီလို ရိုက်ချင်တယ်..အခုတော့ လေ့လာသွားတယ် ကိုညီရေ...